China Nonapeptide-1 fekitari uye vagadziri | JYMed
Product zita: Nonapeptide-1
Molecular Weight: 1206.523 g / mol
Mafomu: kubvisa freckle, kuzvichenesa zvikadaro ganda
Nonapeptide-1 ndomumwe ganda rakanga rachena nonapeptide. Inogona kushandawo kune dzakasiyana-siyana zviitwe kana kusvibisa okugadzirisa zvinhu.
Tunodzivisa rwe-melanin usage kuburikidza vachivhiringidza kuitwa tyrosinase mu melanocytes. Usanyanya hyperpigmentation uye kurerutsa zvasviba nzvimbo kuti dzaparadzwa zuva nedzimwe hosha.
Interfer pamwe melanocyte anotokonya kemikari (MSH). MSH kunowedzera panguva pamuviri, somugumisiro zvimwe zvirwere (semuenzaniso chirwere cheshuga, Addison nechirwere), uye somugumisiro kunyanya zuva chokupfeka.
Nonapeptide-1, pane wevasungwa kuti 200 ug / ML, anokwanisa zvizere zvichivhiringidza kubatana kwetunhu rwe-melanin mu notumwe.
At 100 micromolar wevasungwa, nonapeptide-1 anogona tunodzivisa 25-35% kuti tyrosinase basa iri mienzaniso mhuka uye anogona kuderedza rwe-melanin zviri melanocytes kubudikidza 27-43%
Hatina yatoenda giya. Nhumbi dzedu aivigirwa kupinda USA, UK nezvimwewo, kunakidzwa mukurumbira zvikuru pakati vatengi kuti Hot kutengeswa Hot Nokutengesa Top Grade zvizoro Material Melitane Nonapeptide-1 powder, Welcome munyika vatengi kuti kuonana nesu zvebhizimisi uye inokuvadza rokuti mushandirapamwe. Tiri kuenda kuva akavimbika mudiwa wako uye nokutengesa repair zvidimbu uye nenhumbi mu China.
Hatina yatoenda giya. Nhumbi dzedu aivigirwa kupinda USA, UK nezvimwewo, kunakidzwa mukurumbira zvikuru pakati vatengi kuti Lyophilized Peptide, 98% Melitane Nonapeptide-1 powder, Melitane / Nonapeptide powder, We kungoomerera "Quality First, Mukurumbira First uye Customer First" . Tinosungirwa kupa yepamusoro zvinhu uye zvakanaka pashure-okutengesa mabasa. Kusvikira zvino, zvigadzirwa edu aivigirwa kunyika dzinopfuura 60 uye munzvimbo pasi pose, akadai America, Australia uye Europe. Tinonakidzwa refu mukurumbira pamba uye kunze. Nguva dzose airamba nheyo "Credit, Customer uye Quality", tinotarisira pamwe nevanhu vari mumapoka ose upenyu yakawiriranwa makomborero.